‘हल खुल्ने भएकाले उत्साहित छु’– हल सञ्चालक उमेशराज गिरी – Mero Film
गत चैत ११ गतेबाट ठप्प भएका फिल्म हल शुक्रबारबाट देशभर खुल्दैछ। फिल्म हल खुल्ने भएपछि हल सञ्चालक खुसी देखिएका छन्। लामो समदेखि बन्द रहेका फिल्म हल सरसफाई देखि अन्य कामहरु भइरहेका छन्।
फिल्म हलमा दर्शक के कसरी राखिदैछ र कोरोना संक्रमणबाट जोगिर्दै कसरी दर्शकले फिल्म हेर्न पाउँछन् भन्ने विषयमा नयाँ बानेश्वरमा रहेको वान सिनेमाज् फिल्म हलका सञ्चालक उमेशराज गिरीसँग मेरोफिल्मकर्मीले गरेको कुराकानी :-
फिल्म हल शुक्रबारबाट खुल्दैछ ? के छ तयारी ?
अहिले हलमा सरसफाई गर्ने काम देखि अन्य काम गरिराखिएको छ। स्टाफहरुलाई अहिले ट्रेनिङ दिनेकाम भइरहेको छ ।
कस्तो ट्रेनिङ हो ?
सामाजिक दुरि कायम गरेर कसरी दर्शकहरुलाई हलमा प्रवेश गराउने भन्ने कुराहरु स्टाफलाई सिकाइरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट आफु पनि बचौँ र अरुलाई पनि बचाउँ भन्ने उदेश्यका साथ हलका स्टाफहरुलाई ट्रेन्डिङ दिने काम भइरहेको छ।
लामो समय पछि हल खुल्दैछ? कस्तो लाग्दैछ ?
लामो समयपछि भन्दा पनि मलाई त ओपनिङ गर्न लाग्दैछु जस्तो भइरहेको छ। ९ महिनापछि हल खुल्न लागेको छ। अत्यन्तै हर्षित छु।
यो शुक्रबार दर्शकले कुन–कुन फिल्म हेर्न पाउनेछन् ?
दर्शकले हाम्रो हलबाट ४,५ वटा फिल्म नै हेर्न पाउनुहुनेछ । शुक्रबार हाम्रो हलमा ‘आमा, सेन्टिभाइरस, अर्को फिल्म इन्टु मिन्टु लण्डनमा नेपाली फिल्म भयो भने इंलिस्मा फिल्ममा ‘ब्लड सट’ लगायत फिल्म दर्शकले हेर्न पाउनुहुनेछ । दर्शकले ४, ५ वटा फिल्म छानी छानी हेर्न पाउनुहुने छ।
टिकटको के कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ?
दर्शकले हलमा नै आएर टिकट काट्नपर्छ भन्ने छैन। उहाँहरुले घरमा नै बसेर अनलाइनबाट या इ–सेवा मार्फत पनि टिकट काट्न सक्नुहुनेछ। हामीले अनलाईनबाट टिकट काट्दा लाइन बस्नुपर्ने झन्झनहटाएका छौँ। जसले जहाँबाट जसरी टिकट काट्दा पनि हुन्छ। इ–सेवाबाट टिकट काट्दा क्यास ब्याकको पनि व्यवस्था गरिएको पनि छ। दर्शकलाई टिकट काट्नमा कुनै समस्या छैन। अर्को कुरा फुड पनि घरमा नै बसेर किन्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।
हलभित्र दर्शकलाई कसरी राख्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
हामीले आधा मात्र दर्शक राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। पहिला जति दर्शक सिट भरि राखिन्थ्यो । त्यो व्यवस्था अहिले हलमा छैन। हल भित्र दर्शकलाई डिस्ट्यान्समा राखिने छ। दर्शक बसेको अगाडीको सिटमा पनि दर्शक हुदैन, दायाँ पनि दर्शक हुँदैन र बाँया पनि दर्शक हुँदैन।
यसरी टाढा टाढा दर्शक राखेपछि त टिकट महँगो होला नि ?
टिकट महँगो छैन। पहिला दर्शकले जति रुपैया तिरेर हलमा फिल्म हेर्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि उतिनै रुपैयामा फिल्म हेर्न पाउनुहुनेछ। टिकट दरमा कुनै घटबड छैन।
खाने कुरा किन्दा भिडभाड होला ? यस्तो बेला के गर्नु हुन्छ ?
यसैको लागि हामीले अनलाइन सिस्टम राखेका हौँ। क्युआर कोड राखिदिएका हुन्छौँ। त्यहि क्यु आर कोडमा मेन्यु सहित राखेपछि उहाँहरुले छानी छानी खानेकुराहरु किन्न सक्नुहुनेछ। भिडभाड गरेर ,लाइन बस्नुपर्ने अवस्था हलमा हुँदैन। दर्शकले कोरोना सर्ला कि भन्ने डर मान्नु पर्दैन। फुड लिने ठाउँमा हामीले स्टिकर टाँसेका छौँ। डिस्टेन्समा बसेर नै खानेकुरा लिन सकिन्छ।
दर्शकलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
ठुलो पर्दामा फिल्म हेरेर रमाइलो गर्नका लागि पुरै सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले ३ घण्टाको फिल्ममा जोखिम विना नै फिल्म इन्जोइ लिन सक्नुुहुने छ भन्न चाहान्छु। फुलसेफका साथ दर्शकलाई फिल्म देखाउने मेरो चाहाना हो। अहिले हामीले यहि गर्न खोजिरहेका छौँ।
२०७७ पुष ९ गते १३:३० मा प्रकाशित